नायव सुब्बाको दुर्घटनामा निधन - विवेचना
नायव सुब्बाको दुर्घटनामा निधन
September 24, 2018 444 Views
इलाम, असोज ८ । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत नायव सुब्बा जगत कोइरालाको क्रेनको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ ।
इलाम सदरमुकामस्थित जिरो किलोमिटरबाट कार्यालय जाने क्रममा झापाको कनकाई नगरपालिकाको सुरुङ्गामा आइतबार बिहान ९:४५ बजे पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको ना. १ क ३७२९ नम्बरको क्रेनले पछाडिबाट कोइराला चढेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।
ठक्करबाट गम्भीर घाइते कोइरालाको बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको सुरुङ्गा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक टेकहादुर बस्नेतले बताए । क्रेनको ठक्करबाट कोइराला चढेको मे. ५ प ६६६४ नम्बरको मोटराइकल क्षतविक्षत भएको छ । क्रेनका चालक फरार छन् ।
Previous रहस्यमय बन्दै मेचीनगर जग्गा प्रसङ्ग
Next बिर्तामोडमा द नेक्स्ट र फास्ट ट्रयाक
Pingback: online reputation pricing
August 16, 2017 166,073